विश्वमै पहिलो पटक जीवित दाताको फोक्सो कोभिड बिरामीमा प्रत्यारोपण – Dailny NpNews
आइतबार ०२ जेठ २०७८
कपडा सुकाउँदै गर्दा घरको छतबाट लडेर महिलाको मृत्यु
महामारीमा उपत्यकाका चार प्रहरी क’माण्डर : का’लोबजारी रोक्नेदेखि अक्सिजन सिलिण्डर खोज्दै
हिन्दि भाषामा ‘वीर विक्रम २’, हल बन्द भएपछी भारतीय युट्युबबाट सार्बजनिक गरिँदै
कोरोनाको कहरले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेका बेला भटाभट कुखरा मर्न थाले
एकै घरका ४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, वडाध्यक्ष भन्छन् : गाउँ नै सखाप होला जस्तो भो?
११ महिनाकी बालिका मृ’त्यु सङ्ग ल’डि’रहेकी छन् : सबै सामु सहयोगको अपिल !
विश्वमै पहिलो पटक जीवित दाताको फोक्सो कोभिड बिरामीमा प्रत्यारोपण
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २९, २०७७ समय: ९:४१:५३
बीबीसी। जापानकी एक जना महिला जीवित दाताको फोक्सो प्रत्यारोपण गरिने प्रथम महिला बनेकी छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण फोक्सो प्रभावित भएपछि उनले आफ्ना छोरा र श्रीमानबाट फोक्सोको अंश प्राप्त गरेकी हुन्।
चिकित्सकहरूले उनी छिट्टै पूर्ण रूपमा निको हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। मृ त दाताबाट फोक्सो प्राप्त गरी प्रत्यारोपण गर्नका लागि कुरिरहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या जापान सहित सबै देशहरूमा उच्च रहेको छ।
क्योटो युनिभर्सिटी हस्पिटलमा प्रत्यारोपण सम्पन्न गर्न करिब ११ घण्टा लागेको थियो। ती महिला र दुवै दाताको अवस्था स्थिर रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मृ त दाताबाट चीन, युरोपेली देशहरू र अमेरिकामा दर्जनौँ प्रत्यारोपण भइसकेका छन्।
जापानमा फोक्सो प्रत्यारोपणका लागि कुरिरहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या निकै धेरै रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अन्य स्वास्थ्य समस्या नरहेकी ती बिरामीको फो क्सो प्रत्यारोपण गरिनुपर्ने विषय स्पष्ट भएपछि उनका छोरा र श्रीमान्‌ले आफ्नो फोक्सोको अंश दिने निर्णय गरेका थिए।
उनीहरूलाई फोक्सोको क्षमता घटेपछि देखिन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबारे जानकारी गराइएको थियो। ”यो उपचारले धेरै आशा जगाएको छ किनकि यसले नयाँ विकल्प सृजना गरिदिएको छ,” प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सक प्राध्यापक हिरोसी डेटले भनेका छन्।
को’रोनाबाट ज्यान गुमाएकी छोरीको श’व काँ’धमा बो’केर चि’हान खोज्दै बाबु
६.	थाइराइडका रोगीले भूलेर पनि नखानुहोस् यी ५ कुरा, नत्र पछुताउनु पर्ला
७.	यस कारण देखिन्छ महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या, यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा
८.	७ दिनमै शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय…
९.	के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ !
गर्भवती भएको थाहै थिएन, उडिरहेको विमानभित्र अचानक जन्माइन् छोरा (फोटो फिचर)